यात्रु भन्छन्:चालक निदाउँदा बस दुर्घटना भयो :: नारायण खड्का :: Setopati
यात्रु भन्छन्:चालक निदाउँदा बस दुर्घटना भयो
चितवनको चित्रवन नगरपालिका–१७ स्थायी घर भई हाल छिमेकी देश भारतमा बच्चा बच्चीको शिक्षा दिक्षाको लागि बस्दै आएका ७३ वर्षीय राजेन्द्रप्रसाद तिमल्सिना पहिलो पटक छोरीको घर प्यूठान जाँदै थिए। प्यूठानको प्यूठान नगरपालिका वडा नम्बर २ क्वाडीमा उनकी छोरी ३६ वर्षीया सविता शर्माको घर थियो। सविता उनकी एक मात्रै छोरी हुन्। छोरीको बिहेपछि पहिलो पटक तिमल्सिना सविताको घरमा जाँदै थिए।
‘छोरीले धेरै कर गरेकी थिइन् र आफूलाई पनि छोरीको घर हेर्ने मन लागेको थियो। तर, छोरीले मलाई आफ्नो घर देखाउन नपाउँदै सदाको लागि छोडेर गइन्’, सेतोपाटीसँगको फोन सम्वादमा तिमल्सिनाले भने।
बाबुछोरी सँगैको ३ र ४ नं. सिटमा बसेर यात्रा गरिरहेका थिए। ‘छोरीको घर र गाउँ देखाउने सपना अधुरै रह्यो,’– तिमल्सिनाले रुँदै भने, ‘म कस्तो अभागी रहेछु, बरु म पो जानुपर्ने थियो। दैवले छोरीलाई उठाए।’
अब भारतमा भएका बालबच्चालाई कसरी सम्झाउने? भन्ने पीर भएको उनले बताए।
‘बस नौ दश पटक उल्टदै पल्टदै गयो। छोरीलाई त्यसले च्याप्यो, तर मलाई मान्छेले उद्धार गरेर बचाए,’ तिमल्सिनाले भने। उनले चालक निदाएर बस दुर्घटनामा परेको आशंका व्यक्त गरे। ‘चालक निदाएको हुँदा बस टर्निङबाट सोझै तल झरेको हुनुपर्छ।’ तिमल्सिनाले भने। उनले आफू सवार बसका चालक दाङको भालुवाङमा गाडि रोकेर एक डेढ घन्टा सुतेको बताए।
‘दाङ जाने बसले मेरो बसमा दश जना प्यूठान जाने मान्छे छन् लगेर जानुहोला भनेपछि चालकले एक डेढ घन्टा कुरेको हो,’ तिमल्सिनाले भने।
दाङ जाने बसमा आएका यात्रु राखेर मात्रै बस प्यूठानतिर लागेको उनले बताए । तिमल्सिनाले आफ्नो कानमा टाँका लगाएको र अब ढाड तथा घुडामा चोट रहेको जानकारी दिए ।
जिल्ला अस्पताल विजुवारमा उपचार गराई रहेकामध्ये अर्का एकजना गुल्मी अल्गुंग ओख्लिदहका ४५ वर्षीय तारा विष्टले पनि चालक निदाएका कारण बस दुर्घटनामा परेको बताए। उनी पनि छिमेकी देश भारतको दिल्लीबाट गुल्मीस्थित घर जाँदै थिए।
‘चालक निदको झप्टीमा परेको हुँदा बस दुर्घटनामा परेको हुनुपर्छ,’–विष्टले भने ‘थोरै घुम्ती भए पनि त्यो समथलस्थल नै थियो।’
उनले आफू महेन्द्र नगरदेखि नै उक्त बसमा आएको बताए । ‘त्यति लामो रुटमा एउटै चालकले बस चलाउँदा जोखिम हुने नै भयो नि,’– विष्टले भने,‘लामो दूरीको बसमा दुई वटा चालकको व्यवस्था हुनुपर्ने हो।’
विष्टले पनि आफ्नो नाक काटिएको हुँदा टाँका लगाएर अस्पतालमै आराम गरिरहेको जानकारी दिए । बस दुर्घटना हुनुभन्दा पहिले नै चालकले गीत बजाउन बन्द गरेको हुँदा समेत चालक निन्द्रामा परेको उनको धारणा छ।
प्यूठान जिल्लाको नौबहिनी गाउँपालिका वडा नं. ८ लुप्लुङ निवासी सशस्त्र प्रहरी जवान ३० वर्षीय रमेश भण्डारी पनि उक्त दुर्घटनामा परे पनि ज्यान बचाउन सफल एक भाग्य मानी यात्रु हुन्। उनी रुकुम पूर्वमा कार्यरत छन् र बिदामा घर जाँदै थिए। रुकुमबाट छुट्टै बसमा आएका भण्डारी दाङको भालुवाङबाट पौने २ बजेतिर उक्त बसमा चढेका थिए। त्यहाँदेखि झन्डै २६ किलोमिटरको दूरी पार गरेपछि बस दुर्घटनामा परेको भण्डारीले बताए। उनले पनि चालक निदाएकै कारण बस दुर्घटनामा परेको आशंका व्यक्त गरे ।
‘म दाबीका साथ त भन्न सक्दैन, किनकी म पनि लङ रुटको यात्रा गरिरहेको हुँदा पुरै रेष्टमा थिए। तर बसले लिक छोडेर कोल्टे परेपछि मैले थाहाँ पाएको हुँ,’ भण्डारीले भने।
उनले पनि त्यो दुर्घटना हुने लायकको स्थान नभएको हुँदा चालक निदाउनुको परिणाम दुर्घटना भएको बताए। उनले पनि लामो दूरीको यात्रामा चालक थाकेर निदाउने हुँदा दुई वटा चालक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
‘बसले दश बाह्र भर्‍याङ मार्‍यो र तल गएर एउटा सानो रुखले अड्याउँदा रोकिएको थियो। तलै खसेको भए थप क्षति हुने थियो,’ भण्डारीले भने।
[caption id="attachment_157750" align="alignnone" width="1280"] दुर्घटनाका घाइते।[/caption]
बससँगै तलै झरेका उनले आफूलाई पनि ढाड लगायत शरिरका विभिन्न भागमा चोट लागेको र दुखिरहेको फोनमा बताए। बससंगै तल झरेपनि आफू बसको सिसा तोडेर बाहिर निस्किएको उनले बताए।
‘सिसा तोडेर बाहिर निस्किए र जिल्ला सुरक्षा वेश प्यूठान तथा प्रहरीलाई पनि फोन गरेर सहयोगका लागि छिटो बोलाएको हुँ,’ सशस्त्रका जवान भण्डारीले भने।
बस दुर्घटना भए लगत्तै मानिसहरूले रोईकराई गरेको, चिच्चाइरहेको अवस्थामा आफूले सबैलाई कराएर समयंता राख्न आग्रह गरेको भण्डारीले बताए।
‘मैले सबैलाई सानत्वना दिए। अब हामीलाई केही हुँदैन। हाम्रो छिट्टै उद्धार हुन्छ। प्रहरी आइसकेको छ भन्दै सम्झाएँ,’ भण्डारीले भने।
उनले एकजना भाईले दाई बचाउनु भनेपछि तत्कालै उद्धार गरेको र त्यसपछि त्यही भाईसँगै मिलेर अन्यको उद्धार गरेको बताए।
‘अप्ठेरोमा साहस र धैर्यता चाहिन्छ भन्ने मैले तालिमको समयमा सिकेको कुरा हुन्। मैले त्यहीँ गरेँ। धेरैलाई उद्धार गरेँ। सानत्वना दिए। मिनरल वाटर खोज्दै पानी पिलाए,’ भण्डारीले भने। तर, जति नै प्रयास गर्दा पनि बसले च्यापेको महिलालाई भने उद्धार गर्न नसक्दा उनलाई दुखी लागेको बताए। दुर्घटनाको आधा घन्टापछि सुरक्षाकर्मी आएर उद्धार थालेको उनले बताए ।
यो पनि हेर्नुहोस् :प्युठान दुर्घटना अपडेटः मृतक पाँचै जनाको सनाखत
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ३०, २०७५, ०५:०१:४७
कास्कीका लुम्ले र जुमलेटीमा ठूलो वर्षा, सतर्कता अपनाउन सुझाव